Ahoana no fivezivezena ara-tanana ny fametrahana WordPress | Martech Zone
Ahoana ny fomba fifindra-tanantsika amin'ny fifindrana amin'ny WordPress
Zoma, Aogositra 8, 2014 Zoma, Aogositra 8, 2014 Douglas Karr
Te hieritreritra ianao fa ny fifindrana ny tranokalanao WordPress avy amin'ny mpampiantrano iray mankany amin'ny iray hafa dia tena mora, fa mety hahasosotra tokoa. Nanampy ara-bakiteny ny mpanjifa izahay halina izay nanapa-kevitra ny hifindra avy amin'ny mpampiantrano iray ho any amin'ny iray hafa ary nivadika ho fizahana olana haingana izy io. Nataon'izy ireo izay hataon'ny olona mahazatra - nalefan'izy ireo ny fametrahana manontolo, natondrany ny tahiry ary nafindrany tany amin'ny mpizara vaovao ary nanafatra ny tahiry. Ary nitranga izany… pejy banga.
Ny olana dia tsy mitovy ny namoronana ny mpampiantrano rehetra. Betsaka no manana kinova Apache samy hafa miaraka amina modely samihafa. Ny sasany manana olana fahazoan-dàlana mahatsikaiky indrindra izay miteraka olana amin'ny fampidirana rakitra, anaovana famakiana fotsiny, ary miteraka olana amin'ny fampidirana sary. Ny hafa dia manana kinova samihafa amin'ny PHP sy MySQL - olana mahatsiravina amin'ny indostrian'ny fampiantranoana. Ny backup sasany dia misy rakitra miafina izay manimba ny mpampiantrano hafa noho ny cache manokana sy ny fanodinana any amin'ireo mpizara.
Ary mazava ho azy, tsy tafiditra ao akory io fetran'ny fampidinana rakitra. Izany matetika no olana voalohany raha manana fametrahana WordPress be dia be ianao… ny rakitra database dia be loatra ka tsy afaka mampakatra sy manafatra amin'ny alàlan'ny admin MySQL.
Misy fitaovana tsara sasany any hanampy, toy ny CMS ka hatramin'ny CMS. Azonao atao koa ny mampiasa ny an'ny Automattic VaultPress serivisy - avereno jerena fotsiny ilay tranonkala, apetraho WordPress vaovao amin'ny mpampiantrano vaovao, avereno apetraka ny VaultPress, ary avereno ilay tranonkala. Ireo olona ireo dia nahavita asa be tamin'ny fiasa ny ankamaroan'ny olana sendra anao rehefa manandrana mifindra tranokala ianao.
Na izany aza, mazàna isika mandeha irery irery amin'ireo zavatra ireo ary, amin'ny fomba maharary, dia manao izany matetika ny tenantsika. Tiako ny singa fametrahana vaovao rehefa mifindra amin'ny mpampiantrano vaovao aho fa tsy mitarika olana aminay. Ka ireto ny dingana ampiasainay:
We backup ny fametrahana manontolo ary apetraho sy ampidino eo an-toerana mba hitahirizana azy ireo.
We manondrana ny tahiry (tsy ampidirina amin'ny backup foana) ary ampidino eo an-toerana mba hitehirizana tsara.
We mametraka WordPress vaovao amin'ny mpizara vaovao ary atsangano izany.
We ampio plugins tsirairay hahazoana antoka fa mifanaraka sy miasa daholo izy ireo. Ny mpamorona plugin sasany dia nahavita asa tsara tamin'ny fampidirana ny sehatr'izy ireo amin'ny fitaovana fanondranana na manome ny fanondranana azy manokana sy ny fanafarana.
We aondraho ny atiny avy amin'ny tranonkala efa misy mampiasa ny WordPress Export fitaovana natsangana ho WordPress.
We manafatra izany atiny izany mankamin'ny tranonkala vaovao mampiasa ny fitaovan'ny WordPress Import namboarina hatrany amin'ny WordPress. Izany dia mitaky anao hanisy mpampiasa… somary miasa mafy nefa mendrika ezaka.
We FTP ny folder wp-content / uploads izay misy ny fananana rakitra rehetra nakarinay ho an'ny mpizara vaovao, miantoka ny fahazoan-dàlana hametraka tsara.
Nametraka ny fikirana permalinks.
We aforeto ny lohahevitra ary apetaho mampiasa ny mpametraka lohahevitra WordPress.
Apetrakay mivantana ilay lohahevitra ary amboary indray ny menus.
We avereno ireo widgets ary kopia / apetaho ny atiny ilaina amin'ny taloha ka hatramin'ny mpizara vaovao.
We mandady ny tranonkala hijerena izay olana misy amin'ireo rakitra tsy hita.
We avereno jerena amin'ny tanana ny pejy rehetra ny tranokala hahazoana antoka fa mijery tsara ny zava-drehetra.
Raha toa tsara ny zava-drehetra, dia hanao izany isika havaozy ny fikirakiran'ny DNS anay hanondro ilay mpampiantrano vaovao ary handeha mivantana.
Hataonay antoka fa ny Sakano ny fikirana fikarohana ao amin'ny Settings famakiana dia tsy mandeha.
Manampy izahay CDN na cache rafitra navela ho an'ny mpampiantrano vaovao mba hanafainganana ilay tranonkala. Indraindray ity dia plugin iray, indraindray amin'ny ampahany amin'ny fitaovan'ny mpampiantrano.
Haverinay mamerina mamaky ilay tranonkala amin'ny alàlan'ny Webmasters 'Tools hijerena raha misy olana hitan'i Google.
Hotazominay mandritra ny herinandro na tapitra ny mpampiantrano taloha… sao sanatria misy olana goavana. Rehefa afaka herinandro iray na mihoatra ny fihazakazahana tsara dia hanafoana ilay mpampiantrano taloha izahay ary hanidy ny kaonty.
Tags: backup wordpresscms mankany amin'ny cmsfomba fifindra-monina wordpressmifindra WordPressmifindra tranonkalamifindra wordpresshametraka wordpressmamerina wordpressVaultPressbackup WordPressfamerenana amin'ny laoniny ny wordpresszip wordpress
Ny tontolon'ny fanaraha-maso ny media sosialy sy ny analytics